Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yehyiam Som Onyankopɔn? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Aukan Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bislama Cakchiquel (Western) Cambodian Chitonga Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Dangme Drehu Efik English Ewe Fon French Ga Garifuna Greenlandic Haitian Creole Hausa Hmong (White) Iban Igbo Isoko Italian Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kisi Kisonge Kongo Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Lingala Lunda Luvale Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyaneka Nzema Otetela Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Saramaccan Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Spanish Swahili (Congo) Swati Tahitian Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Twi Tzeltal Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
‘Wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ, na wɔboom kyɛɛ nneɛma, [anaa wɔkɔɔ so hyiaam].’—ASOMAFO NNWUMA 2:42.
NNWOM: 20, 119
ADAKA A WƆATO DIN “NEA ENTI A ƐSƐ SƐ YƐKƆ ASAFO NHYIAM” NO, FA MU NSƐM KYERƐ . . .
nea enti a asafo nhyiam ye ma yɛn.
sɛnea yɛkɔ asafo nhyiam a, ɛboa afoforo.
sɛnea yɛkɔ asafo nhyiam a, Yehowa te nka.
1-3. (a) Dɛn na Kristofo ayɛ de akyerɛ sɛ wɔn ani sɔ sɛ wobehyiam? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
BERE a Corinna dii mfe 17 no, wɔkyeree ne maame kɔtoo afiase wɔ akyirikyiri baabi. Akyiri yi, wɔfaa Corinna nso fii ne kurom de no twaa akwansin mpempem pii kɔɔ Siberia kɔyɛɛ afumdwuma. Wɔma ɔyɛɛ adwuma sɛ abaawa. Ɛtɔ da a, na wɔhyɛ no ma ogyina awɔw mu yɛ adwuma, na na wɔmma no atade a ɔde bɛko awɔw. Ɔhaw yi nyinaa akyi no, Corinna ne onuawa foforo yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛyɛ nea wobetumi biara afi afum hɔ akɔ asafo nhyiam.
2 Corinna kae sɛ: “Yefii afum hɔ anwummere nantew twaa kilomita 25 (akwansin 15) kɔɔ keteke gyinabea. Keteke no tui ahemadakye nnɔn mmienu. Yɛtenaa keteke no mu nnɔnhwerew nsia ansa na yɛresi anantew kilomita du (akwansin nsia) akɔ baabi a yehyiam no.” Corinna ani gyei paa sɛ ɔkɔɔ asafo nhyiam no. Corinna kae sɛ: “Asafo nhyiam no ase no, yesuaa Ɔwɛn-Aban na yɛtoo Ahenni nnwom. Nhyiam a yɛkɔe no hyɛɛ yɛn gyidi den paa.” Anuanom mmea baanu no san kɔɔ afum hɔ nnansa akyi, nanso afuw wura no anhu mpo sɛ wotuu kwan.
3 Yehowa nkurɔfo ani gye ho sɛ wɔne wɔn ho wɔn ho bɛbɔ bere nyinaa. Ná Kristofo a wɔwɔ asomafo no bere so no ani gye ho paa sɛ wobehyiam asom Yehowa na wɔasua ne ho ade. (Asomafo Nnwuma 2:42) Ɛda adi sɛ wo nso w’ani gye ho sɛ wobɛkɔ asafo nhyiam. Nanso sɛnea ɛtaa yɛ anuanom nyinaa no, ebia ɛyɛ wo den sɛ wobɛkɔ asafo nhyiam daa. Ebia wode nnɔnhwerew pii yɛ adwuma anaa wowɔ nneɛma pii a ɛsɛ sɛ woyɛ, enti bere nyinaa na woabrɛ. Sɛ saa a, dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ nea yebetumi biara akɔ asafo nhyiam?  (Hwɛ awiei asɛm no.) Dɛn na yɛbɛyɛ de ahyɛ yɛn Bible asuafo ne afoforo nkuran ma wɔakɔ asafo nhyiam daa? Adesua yi bɛma yɛahu nea enti a asafo nhyiam a yɛbɛkɔ ye ma yɛn, nea enti a ɛboa afoforo, ne nea enti a ɛsɔ Yehowa ani. —Hwɛ awiei asɛm no.
ASAFO NHYIAM BOA YƐN
4. Sɛ yehyiam a, ɔkwan bɛn so na ɛboa yɛn ma yesua Yehowa ho ade?
4 Yɛkɔ asafo nhyiam a, wɔkyerɛkyerɛ yɛn. Yesua Yehowa ho ade pii wɔ asafo nhyiam ase. Nnansa yi, asafo dodow no ara suaa Bɛn Yehowa nhoma no wɔ Asafo Bible Adesua ase. Bere a yesuaa Yehowa su ahorow no, wotee nka sɛn? Na nea wo nuanom ka faa Yehowa ho no nso kaa wo sɛn? Akyinnye biara nni ho sɛ, ɛmaa ɔdɔ a wowɔ ma Yehowa no mu yɛɛ den. Yɛkɔ asafo nhyiam a, yetie ɔkasa ahorow a egyina Bible so, yɛhwɛ ɔyɛkyerɛ ahorow, na sɛ anuanom rekenkan Bible a, yɛyɛ aso tie. Wei nyinaa boa ma yenya Bible mu nimdeɛ pii. (Nehemia 8:8) Wo de hwɛ, nnawɔtwe biara yenya nimdeɛ pii bere a yɛresiesie yɛn ho ama Bible akenkan. Afei sɛ yɛn nuanom ka nea wɔhyɛɛ no nsow wɔ akenkan no mu kyerɛ yɛn a, ɛboa yɛn.
5. Ɔkwan bɛn so na Kristofo nhyiam aboa wo ma wode nea wusua fi Bible mu bɔ wo bra, na sɛn na aboa wo ma w’asɛnka atu mpɔn?
5 Asafo nhyiam boa yɛn ma yɛde nea yɛasua afi Bible mu bɔ yɛn bra. (1 Tesalonikafo 4:9, 10) Ɛho nhwɛso ne Ɔwɛn-Aban Adesua. Woakɔ Ɔwɛn-Aban Adesua bi a ahyɛ wo nkuran ama woayere wo ho wɔ Yehowa som mu, ama wo mpaebɔ atu mpɔn, anaa ama wode onua bi bɔne akyɛ no? Asafo nhyiam a yɛkɔ nnawɔtwe no mu no betumi aboa yɛn ma yɛahu sɛnea yɛbɛka asɛmpa no ne sɛnea yɛbɛboa afoforo ma wɔate nokware a ɛwɔ Bible mu ase.—Mateo 28:19, 20.
6. Ɔkwan bɛn so na asafo nhyiam hyɛ yɛn nkuran na ɛboa yɛn ma yɛyɛ den?
6 Yɛkɔ asafo nhyiam a, yenya nkuranhyɛ. Satan wiase no pɛ sɛ yɛn gyidi yɛ mmerɛw. Ebetumi ama yɛn ani so atan yɛn na yɛn abam abu. Nanso asafo nhyiam hyɛ yɛn nkuran ma yɛkɔ so som Yehowa. (Kenkan Asomafo Nnwuma 15:30-32.) Yɛtaa susuw Bible nkɔmhyɛ a abam ho. Wei boa yɛn ma yenya awerɛhyem paa sɛ ɛbɔ a Yehowa ahyɛ biara bɛbam. Yɛn nuanom ma kasa ahorow de hyɛ yɛn nkuran. Saa ara na nnwom a wofi wɔn komam to de yi Yehowa ayɛ, ne mmuae a wɔma nso hyɛ yɛn nkuran. (1 Korintofo 14:26) Sɛ yɛne wɔn bɔ nkɔmmɔ ansa na yɛafi nhyiam no ase na yɛne wɔn bɔ bere a yɛapɔn nso a, ɛma yɛn ani gye. Yehu sɛ yɛwɔ nnamfo pii a wodwen yɛn ho paa.—1 Korintofo 16:17, 18.
Asafo nhyiam hyɛ yɛn nkuran ma yɛkɔ so som Yehowa
7. Adɛn nti na ɛho hia paa sɛ yɛkɔ asafo nhyiam?
7 Yɛkɔ asafo nhyiam a, Onyankopɔn de ne honhom kronkron boa yɛn. Yesu ma honhom kronkron kyerɛ asafo ahorow no kwan. Nokwasɛm ne sɛ, ɔka kyerɛ yɛn sɛ ‘yentie nea honhom no ka kyerɛ asafo ahorow no.’ (Adiyisɛm 2:7) Honhom kronkron betumi aboa yɛn ma yɛadi nkonim wɔ sɔhwɛ mu na yɛde akokoduru aka asɛmpa no. Ebetumi nso aboa yɛn ma yɛasisi gyinae pa. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nea yebetumi biara kɔ asafo nhyiam ma Onyankopɔn honhom kronkron boa yɛn.
YƐKƆ ASAFO NHYIAM A, YƐBOA AFOFORO
8. Yɛkɔ asafo nhyiam na yɛn nuanom hu sɛ yɛrema mmuae na yɛreto nnwom a, ɔkwan bɛn so na ɛboa wɔn? (Hwɛ adaka yi nso, “ Yɛbɛpɔn Biara, na Wanya Ahoɔden Foforo.”)
8 Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛma yɛn nuanom hu sɛ yɛdɔ wɔn. Yɛn asafo mufo pii refa ɔhaw a emu yɛ den mu. Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Momma yensusuw yɛn ho yɛn ho ho.” (Hebrifo 10:24, 25) Sɛ yɛne yɛn nuanom hyiam hyehyɛ yɛn ho nkuran a, yɛma wohu sɛ yedwen wɔn ho. Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛma yɛn nuanom hu sɛ yɛpɛ sɛ yɛne wɔn bɔ nkɔmmɔ na yehu sɛnea wɔn ho te. Sɛ wɔte sɛ yɛrema mmuae na wohu sɛ yefi yɛn koma mu reto nnwom nso a, ɛhyɛ wɔn nkuran paa.—Kolosefo 3:16.
9, 10. (a) Asɛm a Yesu kae wɔ Yohane 10:16 no, kyerɛ sɛnea ɛboa yɛn ma yehu nea enti a ɛsɛ sɛ yɛne yɛn nuanom hyiam. (b) Yɛkɔ asafo nhyiam daa a, yɛbɛyɛ dɛn aboa obi a n’abusua apo no?
9 Yɛkɔ asafo nhyiam a, ɛboa ma asafo no yɛ baako. (Kenkan Yohane 10:16.) Yesu de ne ho totoo oguanhwɛfo ho, ɛnna ɔde n’akyidifo nso totoo nguan ho. Susuw asɛm yi ho hwɛ: Yɛmfa no sɛ nguan mmienu gyina bepɔw bi so, mmienu gyina amena bi mu, ɛnna baako nso gyina baabi foforo. Wohwɛ a, yebetumi afrɛ saa nguan nnum no sɛ nguankuw? Dabi, efisɛ nguankuw boa wɔn ho ano di wɔn hwɛfo akyi. Enti sɛ yɛankɔ asafo nhyiam a, na yɛayi yɛn nuanom baako ahyɛ wɔn nsa. Ɛsɛ sɛ yehyiam sɛ “kuw biako” na yedi “ɔhwɛfo biako” akyi.
10 Asafo nhyiam boa ma yɛyɛ abusua baako a ɔdɔ wom. (Dwom 133:1) Asafo no mufo binom wɔ hɔ a, wɔn awofo anaa wɔn nuanom apo wɔn. Nanso Yesu hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛma wɔanya abusuafo a wɔbɛdɔ wɔn na wɔahwɛ wɔn. (Marko 10:29, 30) Sɛ wokɔ asafo nhyiam daa a, asafo no muni bi betumi de wo ayɛ agya, ɛna, onuabarima, anaa onuabea. Sɛ yesusuw ho saa a, yɛbɛyɛ nea yebetumi biara akɔ asafo nhyiam daa.
YƐBƐPƆN BIARA, NA WANYA AHOƆDEN FOFORO
“NNANSA yi, yare reteetee me. Ɛyɛ den sɛ mɛkɔ asafo nhyiam. Nanso, sɛ meyɛ nkakrankakra du hɔ a, honhom fam aduan a Yehowa asiesie no boa me paa. Ɛwom sɛ me kotodwe tutu me, komayare reteetee me, na asikreyare ama merehu amane pii de, nanso bere biara a yɛbɛpɔn asafo nhyiam no, na manya ahoɔden foforo.
“Da a edi kan a metee sɛ yɛn asafo no reto dwom 68 no, misui. Dwom no asɛmti ne ‘Mmɔborɔni Mpaebɔ.’ Ná dwom no yɛ dɛ yiye! Afiri a ɛhyɛ m’asom nti metee obiara nne, na metoo dwom no bi. Hwɛ sɛnea m’ani gyei wɔ hɔ!”—George, wadi mfe 58.
YƐBƐMA YEHOWA ANI AGYE
11. Ɔkwan bɛn so na yɛkɔ asafo nhyiam a, ɛboa ma yɛde nea ɛfata ma Yehowa?
11 Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛde nea ɛfata ma Yehowa. Yehowa na ɔbɔɔ yɛn enti ɛsɛ sɛ yɛda no ase, yedi no ni, na yeyi no ayɛ. (Kenkan Adiyisɛm 7:12.) Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛbɔ Yehowa mpae, yɛto nnwom yi no ayɛ, na yɛkamfo no. Hwɛ hokwan kɛse a yenya de som Yehowa nnawɔtwe biara!
Sɛ yɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛkɔ asafo nhyiam a, Yehowa hu. Na sɛ yemia yɛn ani kɔ a, n’ani sɔ
12. Sɛ yetie Yehowa ahyɛde a ɛka sɛ yɛnkɔ asafo nhyiam no a, ɛka no sɛn?
12 Yehowa na ɔbɔɔ yɛn, na ɛsɛ sɛ yetie no. Wama yɛn ahyɛde sɛ yenhyiam bere nyinaa, ne titiriw, bere a awiei no rebɛn no. Enti sɛ yedi saa ahyɛde no so a, Yehowa ani gye. (1 Yohane 3:22) Sɛ yɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛkɔ asafo nhyiam a, Yehowa hu. Na sɛ yemia yɛn ani kɔ a, n’ani sɔ.—Hebrifo 6:10.
13, 14. Adɛn nti na yɛka sɛ yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛbɛn Yehowa ne Yesu?
13 Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛma Yehowa hu sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛn ɔne ne Ba no. Yɛkɔ asafo nhyiam a, yesua Bible. Yehowa kyerɛ yɛn nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛnea ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra. (Yesaia 30:20, 21) Sɛ wɔn a wɔnyɛ Yehowa asomfo ba yɛn nhyiam ase a, wohu sɛ Onyankopɔn rekyerɛ yɛn kwan. (1 Korintofo 14:23-25) Yehowa ma honhom kronkron kyerɛ yɛn kwan wɔ asafo nhyiam ase, na yehu sɛ ɔno na ɔkyerɛkyerɛ yɛn. Enti sɛ yɛkɔ asafo nhyiam a, yetie Yehowa asɛm, yehu sɛ ɔdɔ yɛn paa, na ɛma yɛbɛn no.
14 Yesu yɛ asafo no Ti. Ɔkae sɛ: “Nea baanu anaa baasa ahyiam me din mu no, na mewɔ wɔn mfinimfini.” (Mateo 18:20) Bible san ka sɛ Yesu ‘nam’ asafo ahorow no “mfinimfini.” (Adiyisɛm 1:20–2:1) Ɛda adi sɛ Yehowa ne Yesu ka yɛn ho, na wɔrehyɛ yɛn den wɔ asafo nhyiam ase. Sɛ Yehowa hu sɛ woreyɛ nea wubetumi biara sɛ wobɛbɛn ɔne ne Ba no a, wohwɛ a, ɛbɛka no sɛn?
15. Yɛkɔ asafo nhyiam a, dɛn na ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ yetie Onyankopɔn?
15 Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛma Yehowa hu sɛ yɛpɛ sɛ yetie no. Yehowa nhyɛ yɛn sɛ yentie no. (Yesaia 43:23) Enti sɛ yedi n’ahyɛde so kɔ asafo nhyiam a, yɛma ohu sɛ yɛdɔ no, na yegye tom sɛ ɔwɔ hokwan sɛ ɔkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ. (Romafo 6:17) Nhwɛso bi ni. Yɛmfa no sɛ yɛn adwumawura pɛ sɛ yɛyɛ adwuma pii, na ɛno bɛma yɛatoto asafo nhyiam mu. Sɛ ɛba saa a, dɛn na yɛbɛyɛ? Anaa ebia aban bɛka sɛ, obiara a ɔbɛkɔ asafo nhyiam akɔsom Yehowa no, wɔbɛbɔ no ka, wɔde no bɛto afiase, anaasɛ wɔbɛtwe n’aso denneennen. Ɛtɔ da a, sɛ́ anka yɛbɛkɔ asafo nhyiam no, na yɛpɛ sɛ yekogye yɛn ani mmom. Nsɛm yi mu biara mu no, yɛn ankasa na ɛsɛ sɛ yesi nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ ho gyinae. (Asomafo Nnwuma 5:29) Nanso bere biara a yɛbɛyɛ nea Yehowa pɛ no, yɛma n’ani gye.—Mmebusɛm 27:11.
KƆ SO NE WO NUANOM NHYIAM
16, 17. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ na tete Kristofo no ntoto asafo nhyiam a wɔbɛkɔ ase? (b) Ná Onua George Gangas te nka sɛn wɔ Kristofo nhyiam ho?
16 Bere a asuafo no hyiaam wɔ Pentekoste afe 33 akyi no, Kristofo no hyiaam daa som Yehowa. Bible ka sɛ, ‘Wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ maa asomafo no nkyerɛkyerɛ, na wɔboom kyɛɛ nneɛma, anaa wɔkɔɔ so hyiaam.’ (Asomafo Nnwuma 2:42) Bere a Roma aban ne Yudafo nyamesom akannifo retaa Kristofo mpo no, wɔkɔɔ so hyiaam. Ɛwom, na ɛyɛ den sɛ wɔbɛkɔ nhyiam de, nanso wɔyɛɛ nea wobetumi biara kɔe.
17 Ɛnnɛ nso, Yehowa asomfo ani sɔ asafo nhyiam paa, na wɔkɔ a wɔn ani gye. George Gangas de bɛboro mfe 22 somee sɛ Akwankyerɛ Kuw no muni. Ɔkae sɛ: “Me de, ade baako a ɛma m’ani gye na ɛhyɛ me nkuran paa ne sɛ me ne me nuanom behyiam. M’ani gye paa sɛ mɛka anuanom a wodu Ahenni Asa so ntɛm ho, na sɛ ɛbɛyɛ yiye a, maka wɔn a womfi hɔ ntɛm nso ho. Sɛ me ne Onyankopɔn nkurɔfo rebɔ nkɔmmɔ a, m’ani gye me komam. Me ne wɔn wɔ hɔ a, mihu sɛ efie ne fie, mete nka sɛ mewɔ honhom fam paradise.” Ɔde kaa ho sɛ: “Me koma so ade paa ne sɛ mɛkɔ asafo nhyiam.”
18. Wote nka sɛn wɔ asafo nhyiam ho, na dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ?
18 Sɛ wokɔ asafo nhyiam kɔsom Yehowa a, wo nso wote nka saa? Sɛ saa a, kɔ so yɛ nea wubetumi biara ne wo nuanom nhyiam. Sɛ ɛyɛ den mpo a, mia w’ani kɔ. Ma Yehowa nhu sɛ wote nka sɛ Ɔhene Dawid. Ɔkae sɛ: “Yehowa, medɔ wo fie tena.”—Dwom 26:8.
^  (nkyekyɛm 3) Yɛn nuanom binom ntumi nkɔ asafo nhyiam daa esiane tebea ahorow a wontumi nyɛ ho hwee nti. Ebia na wɔyare denneennen. Wobetumi anya awerɛhyem sɛ Yehowa nim nea wɔrefa mu, na n’ani sɔ mmɔden biara a wɔrebɔ sɛ wɔbɛsom no no paa. Asafo mu mpanyimfo betumi aboa wɔn a wɔte saa ma wɔatie dwumadi a ɛkɔ so wɔ asafo nhyiam ase no. Wobetumi ama wɔatie wɔ tɛlɛfon so, na wobetumi nso akyere agu afiri so akɔma wɔn.
^  (nkyekyɛm 3) Hwɛ adaka a wɔato din “ Nea Enti a Ɛsɛ Sɛ Yɛkɔ Asafo Nhyiam” no.
NEA ENTI A ƐSƐ SƐ YƐKƆ ASAFO NHYIAM
Yehowa kyerɛkyerɛ yɛn.
Onyankopɔn honhom kronkron boa yɛn.
Yenya hokwan kyerɛ yɛn nuanom sɛ yɛdɔ wɔn.
Yɛka bɛn yɛn nuanom.
Yɛde nea ɛfata ma Yehowa.
Yɛma Yehowa hu sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛn ɔne ne Ba no.
Yɛma Yehowa hu sɛ yɛpɛ sɛ yetie no.
Yehyiam som: Yɛdɔ Yehowa na yɛpɛ sɛ yetie no, enti yɛn ani gye ho paa sɛ yɛne yɛn nuanom bɛbom ayi no ayɛ. Yɛkɔ asafo nhyiam a, yɛbɔ Yehowa mpae, yɛto nnwom yi no ayɛ, na yɛkamfo no. Wei ma Yehowa ani gye